Ny hevitra momba ny solaitrabe BRANDCONCEPT
Rebeit Medical Equipment Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2004
Ny orinasa dia nanolo-tena tamin'ny varotra fitaovana tamin'ny alàlan'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy ara-pahasalamana, manana sy hopitaliben'ny tafika, hopitaly fikambanan'ny oniversite any Beijing Peking, hopitaly Beijing, minisiteran'ny fahasalaman'ny hopitaly finamanana china-Japan, toy ny andrim-panjakana hopitaly 80 mahery hananganana fifandraisana fiaraha-miasa, ary amin'ny 2013, sy ny orinasa laser lehibe fitsaboana any Shina, Wu Hanqi orinasa laser orinasa nifanaovan'i Beijing orinasa iraisana hiara-miasa, Serivisy toa an'i Meilai, Yixing, Lido ary ireo andrim-pitsaboana hatsaran-tarehy tsy miankina hafa mihoatra ny 100.
Taorian'ny 14 taona nangonina, tamin'ny taona 2018, mba hanomezana fahafaham-po ny onjam-piainan'ny Internet sy ny fiakaran'ny foto-kevitra fizarana mba hametrahana ny marika "Ruibeite" ary hanompo tsara kokoa ny tsenan'ny hatsaran-tarehy ara-pahasalamana, ny orinasa dia nivoatra tsikelikely fitaovam-pitsaboana hatsaran-tarehy amin'ny sehatry ny fitsaboana antoko fahatelo miaraka amina matihanina sy angona ho fototra. Ny orinasa dia miankina amin'ny teknolojia matihanin'ny ekipa dokotera kilasy voalohany kilasy voalohany. Manolo-tena amin'ny fanofana sy fivarotana fitaovana, consulting management, fihaonambe matihanina ary modules hafa, manome faribolana fiaraha-miasa ekolojika matanjaka ho an'ny andrim-pitsaboana sy hatsaran-tarehy, rojo biolojika sy hatsaran-tarehy ary sehatra fampiasam-bola.
Ruibit Medical Devices Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2004
Manangana fifandraisana amin'ny fiaraha-miasa ny andrim-panjakana hopitaly
Manompo toeram-pitsaboana sy estetika tsy miankina 100 mahery toa an'i Meilai, Yixing, Lido, sns.
Tamin'ny taona 2018, mba hanomezana fahafaham-po ny onja ekonomika amin'ny Internet sy ny fiakaran'ny foto-kevitra fizarana dia natsangana ny marika "Ribit"
Ny ekipan'ny orinasa
Beijing (xi 'an) rui mpamorona kosmetika tao anatin'ny 10 taona nirotsaka tamin'ny sehatry ny tarehy, fianarana tsy tapaka ary fampidirana teknolojia hatsaran-tarehy avy any ivelany mandroso, vokatra ary fomba marketing, ary amin'ny alàlan'ny traikefa miasa manankarena amin'ny vatana sy sehatra famokarana vokatra tsy manam-paharoa, ho an'ny fikambanana cosmetology fitsaboana ara-pahasalamana maro an-trano dia manome fanabeazana sy fanofanana ny mpiasa, in'arivony heny Manampy azy ireo hanatsara ny zava-bitan'izy ireo sy ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ary ekena ho olona voalohany nanatsara ny ekipa tao amin'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny hatsaran-tarehy.
Beijing (Xi 'an) mpanorina ny Rebeit Medical Cosmetology
Niditra tao amin'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy aho nandritra ny 6 taona, nanomboka tamin'ny SPA hatsaran-tarehy nentim-paharazana ka hatrany amin'ny fitantanana ny hoditra Koreana ka hatramin'ny anti-fahanterana manatsara ny fahasalamana amin'ny fiaraha-monina ankehitriny. Izaho dia nianatra sy nanadihady matetika tany Hong Kong, Korea Atsimo ary Japon mba hifandray amin'ireo fitaovana sy vokatra mahazatra ankehitriny, mba hanamboarana fandaharana fikolokoloana hoditra arakaraka ny filan'ny mpanjifa ary hamahana ny olan'ny vehivavy hatrizay hatrizay . Misy programa fitsaboana tsy manam-paharoa ho an'ny hoditra samihafa, indrindra ho an'ny hoditra manahirana amin'ny fisorohana, fitsaboana, fanamboarana ary fiarovana ireo lafin-javatra efatra hiarovana ny hoditrao amin'ny fomba rehetra.
Lehilahy manao dokambarotra zokiolona, ​​manam-pahaizana momba ny haino aman-jery vaovao.
Nanangana marika voninkazo avo lenta sy marika tsy miankina mahaleo tena, nanolo-tena hanome ny vehivavy vokatra tsara sy fomba fiainana tsara tarehy.
Midira amin'ny indostria BEAUTY ara-pahasalamana sy Real Beauty mandritra ny herintaona, velomy ny fahalalana BEAUTY ara-pahasalamana amin'ny mpampiasa an-tapitrisany amin'ny alàlan'ny Internet, tsaho ny hatsarana BEAUTY ara-pitsaboana ary omeo vaovao amin'ny Internet
Efa 15 taona izy no nirotsaka tamin'ny sehatry ny cosmetolojia fitsaboana. Izy dia niasa ho toy ny tale jeneraly ampitan-dranon'ny Huaxi Group, teratany sinoa hatsaran-tarehy amin'ny fitsaboana. Nandritra ny fotoana nitondrany dia nahatratra ny fitomboana taona maro ny fandraharahana any ivelany an'ny Huaxi Group. Ny sehatry ny hatsaran-tarehy ambanin'ny tany nandritra ny taona maro, dia nampivelatra ny tsirony tsy manam-paharoa sy ny traikefa nanan-karena tamin'ny fizotran'ny vokatra, ho an'ny orinasa an-jatony maro an-trano manatsara tarehy manome serivisy fandraharahana stratejika sy serivisy fanoloran-tena ho an'ny matihanina, manomboka amin'ny fiofanana mialoha momba ny vokatra, ny fandrindrana ny vokatra ary ny fametrahana. , ny fampiasana tara, fikarakaran'ny mpanjifa dia tsara andalana tena niainana ady.
Dokotera manokana momba ny hatsarana
Nahazo diplaoma avy amin'ny University University of Bethune (University of Jilin ankehitriny), izy dia iray amin'ireo mpitsabo cosmetika voalohany ao Shina. Nifantoka tamin'ny famolavolana hatsarana tarehy tatsinanana izy, efa folo taona mahery izay no nanao fandidiana plastika sy kosmetika. Fantatra amin'ny fandidiana voajanahary sy marefo ny fandidiana. Manana zava-bita tsy manam-paharoa amin'ny asa fanadiovan-tarehy izy, hatsaran-tarehy Koreana maso, sary sokitra hatsaran-tarehy, ary fitiavana aka vehivavy. Fandidiana plastika amin'ny fo.
Departemantan'ny fitsaboana klinika, ivon-toerana momba ny siansa ara-pahasalamana ao amin'ny Oniversite Peking
Dokotera any Taiwan Nice Clinic, Dean ao amin'ny Beijing Andai Medical Beauty Clinic
Dokotera voamarina Merz tany am-boalohany
Dokotera miasa any Ultherapy (polar sonic lift)
Ny tarehy feno voasokitra feno tsindrona
Dokotera Princess Hyaluronic Acid Princess voatondro voatondro
Manan-karena fanandramana fanoherana ny fahanterana
Mirotsaka amin'ny hatsarana ara-pitsaboana mandritra ny enin-taona, manana fikarohana teôlôjika lalina sy fanandramana ara-pahasalamana manankarena amin'ny hatsaran-tarehy laser, tsara amin'ny hatsaran-tarehy elektrôlika, fitsaboana ny melasma, freckles, sunburn, teboka kafe, mony ary hyperpigmentation aorian'ny mony, fanavaozana ny hoditra, fitantanana feno hoditra. famelomana aina.
Manam-pahaizana momba ny fandidiana picouay amerikana picoway, mpanolotsaina teknika manokana an'i Sinoron
Mpampianatra voamarina Thermage
Manana traikefa manan-karena amin'ny fandaminana fitsaboana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana
US ultherapy farany sonic waverati mpampianatra fandidiana voamarina
Mpampianatra momba ny fiofanana amin'ny fitsaboana Laser System an'ny hatsaran-tarehy any Azia
Sinoron Picoway manam-pahaizana momba ny fandidiana voamarina
Fikarohana lalina nandritra ny taona maro momba ny olana mety hitranga amin'ny hoditra sy ny fanamboarana ny toerana
● Fivarotana fitaovana ● Fiaraha-miasa amin'ny fanofana fitaovana ● Agent an'ny vokatra BCN
Fitsapana ny hoditra Ober
Famakafakana siantifika sy intuitive ny olana isan-karazany ao amin'ny sosona ambonin'ireo sy lalina amin'ny hoditra. Mampiseho amin'ny fomba mahaliana ny krizy mety hitranga amin'ny hoditra toy ny pigmentation lalina, ny rà mena, ny ketrona ary ny sary, mahita olana amin'ny hoditra 10 taona mialoha, misoroka, mamantatra ary mitsabo aloha.
Ny Generation Faharoa Picosecond Picoway
1064/532 / 785nm halavan'ny telo miaraka amin'ny hery mitsivalana samihafa hitondrana ny toe-piainana rehetra: ny pulse 300ps fohy dia fohy dia mamokatra vokarin'ny hazavana mahery vaika kokoa, mampihena be ny isan'ny fitsaboana, tsy dia mahazo aina loatra, maody fanalefahana hologramika 360 degre, mahazo ny collagen vaovao ny hoditra .
Ny Thermage amin'ny Generation Fahefatra
Fanandratana, fanamafisana, fanadiovana ary fanamafisana plastika tsy mitongilana, tsy mitaky fandidiana na tsindrona, fitsaboana angovo tsy mampiditra hery, tsy manafika sy mandaitra, manosotra, manenjana, mihinjitra ary manisy tsipika ny tarehy, ny vokany dia ampitahaina amin'ny fandidiana fanandratana tarehy.
Thermage amin'ny Generation fahadimy
Famotopotorana mahomby feno (Intellecteur 4.0) manontolo hatramin'ny 25%. Ny fikarohana momba ny vatana dia manampy mavitrika hovitrovitra manatsara ny fampiononana ny fitsaboana. Ny tarehy sy ny vatana dia afaka mankafy ny hovitrovitra manodidina. Kely kokoa sy maivana kokoa izy io. Ny tahony dia noforonina ergonomika mba hahazoana antoka ny hovitrovitra malama. Ampifanaraho tsara ny angovo isaky ny onjam-peo arakaraka ny toerana fitsaboana mba hanatsarana ny angovo azo amin'ny hoditra isaky ny santimetatra.
Ny mari-pana rafitra fiantohana mari-pana (Ulthera) tsara indrindra dia manodidina ny 68-72, izay ny mari-pana mety indrindra amin'ny denaturation collagen mandaitra. Amin'ny fampiasana ultrasound mifantoka dia tsy ilaina ny manafana ny hoditra mihitsy, ary tsy hiteraka fahavoazana amin'ny hoditra izany.
Ny angovo bipolar RF dia omena ny hoditra amin'ny alàlan'ny fantsona iray misy andalana fanjaitra elektroda kely (fanjaitra 64 na fanjaitra 44), elektroda mavitrika ary elektroda miverina lehibe. Ilay teboka tsy simba eo anelanelan'ireo fanjaitra elektrôtra dia miasa ho toy ny "reservoir de sitrana" hanasitranana ny dermis lalina ary hiteraka fihenan'ny collagen sy ny fihenan'ny. Ireo antony mampitombo dia namporisika ny fampifangaroana collagen vaovao. Soloy kofehy vaovao ny collagen taloha. Ireo kofehy vaovao dia manana rafitra matevina kokoa sy voatsara kokoa hanomezana ketrona mihena sy fisehoan'ny hoditra malama kokoa.
Ny fitaovana fampidirana rano-hazavana Derma Shine 3 vao aorina any Korea Atsimo dia mampiasa teknolojia faneriterena miiba mba hamenoana tsara ny otrikaina amin'ny hoditra amin'ny halalin'ny 1,28 mm amin'ny dermis. Alohan'ny hidiran'ny microneedles amin'ny hoditra, ampiasao ny metatra faneriterena ratsy hampiakatra ny hoditra, ary avy eo fanjaitra marobe avy eo miditra amin'ny sosona dermis lalina. Ny fatran'ny tsindrona sy ny fatran'ny tsindrona dia azo ahitsy amin'ny fampisehoana LED. Ho fanampin'izany, ny tsindry ny syringe dia mivoaka alohan'ny hivoahan'ny fanjaitra, noho izany dia tsy misy fatiantoka otrikaina.
Ny tokana eto amin'izao tontolo izao - eken'ny DA Amerikanina. Ny teknolojia patantin'ny radio tsy miankina tany am-boalohany dia mampihetsika ny sosona lava amin'ny collagen amin'ny faritra tsy miankina hanamboarana sy hitombo. Tsy manafika, tsy misy fanaintainana, tsy misy fotoana fanarenana, manamafy sy manosotra ny teknolojia farany hamahana ny fialan-tsasatra manokana
Vivive no hany teknolojia fandrosoana izay mampanantena fa hanatsara be ny fialan-tsasatry ny faritra manokana sy ny fahatsapana ny G-spot amin'ny fitsaboana teny.
THERMIVA zazakely tsy miankina
THERMIVa dia fitaovana teknolojia avo lenta nohafarana avy any Etazonia izay mampiasa teknolojia fampitana hafanana faran'izay manan-tsaina. Nandany fanamarinana roa iraisam-pirenena momba ny FDA sy CE. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fanamafisana ny fiainana manokana sy ny fanatsarana ny labia, tsy misy fanatoranana, fandidiana ary fanamboarana. Tetikasa fanalefahana aina sy tsy miankina.
● Tsy fandidiana ● Tsy voafehy ny mari-pana ● Ny hafanan'ny radio